Jamie Carragher Oo Sheegay Sababta Magacyada Waaweyn Khadka Dhexe Ee Man United Dhibaato Ugu Yihiin Koxxda | Somalia News
Ra’iisul Wasaaraha oo Baydhabo ka dhagax-dhigay Mashaariic Horumarineed+Sawirro
Jamie Carragher Oo Sheegay Sababta Magacyada Waaweyn Khadka Dhexe Ee Man United Dhibaato Ugu Yihiin Koxxda
Halyeeyga Kooxda Liverpool ee Jamie Carragher ayaa aaminsan in qadka dhexe ee kooxda Manchester United ee ay ka buuxaaan xiddigaha heerka caalami ah tahay mid aad u fudud in laga faa’iideysto.
United ayaa xagaagan ku soo dartay xiddiga khadka dhexe ee Donny van de Beek xiddigihii khadka dhexe ee horay u sii joogay ee ay ka mid yihiin Paul Pogba iyo Bruno Fernandes.
Laakiin kadib markii ay ciyaareen kulankoodii ugu horeeyay ee horyaalka Premier League waxa la tusay xaqiiqada iyaga oo guuldaro 3/1 ah kala kulmay kooxda Crystal palace.
Inkasta oo uu Halyeeyga Liverpool ee Carragher Aaminsanyahay in aanay ahayn in laga wal-walo maadama ay United dhanka kale u rogi karto xaalka hadana waxa uu sheegay in ay United u baahantahay in ay isku dheeli tirnaan ku samayso khadkeeda dhexe.
Khabiirka Sky Sports ka hawl gala ee Jamie Carragher ayaa aaminsan in nidaamkooda haatan ee khadka dhexe u Nugulyahay weerarka rogaal celiska ah.
“Dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore, United si fiican ayay u ciyaaraysay, dib ayeyna ugu laaban doonaan taas,” ayuu yiri Carragher.
“Laakiin kuma qanacsani kooxdan, oo haatan noqoneeysa koox kubad heysasho badan tan ilaa markii uu kooxda yimid Fernandes xilli uu Pogba sii jooggay kooxda”.
“Mar walba oo aad kubada haysato waa mar walba oo aad halis ugu jirto weerarka rogaal celiska ah”.
“Khadka dhexe ee aniga ahaan, sax maahan, xitaa magacyada waaweyn”.
Previous articleBeesha Caalamka oo Doorashada Lagu Heshiiyey Ku Sheegtay Mid Rajo Xumo Ah
Next articleMusharax Madaxweyne Cabdikariin Guuleed oo sharaxay Barnaamijkiisa siyaasadeed
Diogo Jota oo fariin u diray ciyaartoyda Liverpool kaddib guushii ay ka gaareen Leicester City
(Liverpool) 23 Nof 2020. Xiddiga kooxda Liverpool ee Diogo Jota ayaa fariin u diray saaxiibadiis Reds, kaddib guushii ay xalay kaga gaareen naadiga Leicester City horyaalka Premier League ee dalka England. Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Leicester City, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0, ciyaar qeyb ka ahayd kulamada Toddobaadkan ee horyaalka Premier League. Sida laga soo xigtay shabakada caalamiga ah ee “BBC” Xiddiga kooxda Liverpool ee Diogo Jota ayaa ciyaarta kaddib sheegay: “U ciyaarista kooxdan heysata horyaalnimada adduunka micno weyn ayey leedahay, waxaan kaliya rajaynayaa inaan sii wadno guulaysiga kulamada, sidoo kalena muhiim ayaan ka noqon karaa.” “Waxaan qabanay shaqo weyn oo weerar ah, waxaan abuurnay fursado, iyo sidoo kale difaacasho. Ugu dambeyntiina, waxay ahayd ciyaar weyn.” “Koox walba waxay dareemeysaa isla dareenkan oo kale, qof walba wuxuu noqon karaa mid muhiim ah, waxaana u baahanahay qof walba inuu u diyaar garoobo jir ahaan iyo maskax ahaanba si uu noo caawiyo”. Waxaa xusid mudan in Liverpool ay kujirto kaalinta labaad ee miiska kala sareynta horyaalka Premier League iyadoo leh 20 dhibcood, waxayna ka hooseeysaa hogaamiyaasha Tottenham Hotspur oo ay isku dhibco yihiin, balse farqi goolal ah hoggaanka ku heysa. Gool FM.
RIKOODH: Zlatan Ibrahimovic Oo Isku Qoray Taariikhda Horyaalka Serie A-da.
Weeraryahanka Milan Zlatan Ibrahimovic ayaa isku qoray taariikhda Serie A isagoo noqday ciyaaryahankii afaraad ee shabaqa soo taabto lixdii kulan ee ugu horeysay horyaalka xilli ciyaareedka. Halyeeyga reer Sweden ayaa wali sii in uu Aamusiyo dadka dhaleeceeya iyada oo qaab ciyaareed fiican kula jira hogaamiyayaasha horyaalka Serie A-da. Xiddiga oo 29 jir ah ayaa la sheegay in uuna qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigi karin waliba noqon karin gool dhaliyaasha bilowgii xilli ciyaareedkan laakiin waxa uu sameeyay sidaas. Axadii Zlatan ayaa sii watay gool dhalintiisa isaga oo dhaliyay 2 gool kulankii ay garaaceen kooxda Napoli kulan ka tirsanaa Serie A-da. Ibrahimovic ayaa sidoo kale noqday xiddigii ugu da’da weynaa ee horyaalka Serie A-da ka dhaliya ugu yaraan 10 gool 8-da kulan ee ugu horeeya xilli ciyaareedkan. Rikoodhkan waxa kaga horeeyay 3 xiddig oo hore kuwaas oo gool dhaliyay 6-da kulan ee ugu horeeya horyaalka Serie A-da. Xiddiga Gabriel Batistuta ayaa noqday midkii ugu horeeyay ee rikoodhkaas dhigay isaga oo u sameeyay kooxda Fiorentina xilli ciyaareedkii 1994-95, kahor inta uusan Christian Vieri sidaas samayn isaga oo inter Milan jooga 2002-03 halka xiddiga Krzysztof Piatek sidaas sameeyay xilli ciyaareedkii 2018/19 isaga oo jooga Genoa. Let’s block ads! (Why?)
Netanyahu oo booqasho ku tegay Sacuudi Carabiya
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Riyadh (Caasimadda Online) – Sida ay xaqiijiyeen warbaahinta Israel, Ra’iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa safar qarsoodi ah ku tagay dalka Sacuudi Carabiya, xilli aysan labada dhinac midkood shaacin safarkaas, halkaasi oo uu kulan kula qaatay dhaxal sugaha Sucuudiga Maxamed Bin Salman. Sida ay werisay warbaahinta Israel, safarka Netanyahu ayaa dhacay maalintii Axadda. Kulanka ayaa lagu soo waramayaa in looga hadlay xiriirka labada dhinac, xili ay dalalka carabtu ay heshiis nabadeed la galeen Israel oo ay kala dhaxeysay xiisada Falastiin, midaasi oo uu gadaal ka riixayay Donald Trump. Warar kale ayaa sidoo kale sheegaya in kulanka Netanyahu iyo Maxamed Bin Salmaan uu goob joog ka ahaa xoghayah arrimaha dibedda Mareykanka, Mike Pompeao. Inkasta oo aysan jirin warar rasmi ah oo ku aadan kulankaasi oo kasoo baxay labada dhinac, ayaa haddana waxa jira qoraal uu Twitter-ka soo dhigay, la taliyaha Netanyahu (Topaz Luk) oo u muuqday mid uu ku sheegayo in kulan uu dhacay. Warbaahinta Israel qaarkeed ayaa sheegtay in ujeedka ugu weyn ee kulanka uu ahaa sidii Sacuudiga looga dhaadhacsiin lahaa inay xiriir la yeelato maamulka Yahuuda. Maamulka Trump ayaa isku dayayay in Sucuudiga uu ka dhaadhiciyo inuu heshiis la galo Israa’iil kaddib markii qaar kamid ah dalalka carabta ay heshiis nabadeed la galeen Israa’iil kaas oo dib loogu soo celinayo xiriirkii kala dhexeeyay. Dowladda Sacuudiga ayaa laga yaabaa inay kusoo biirto wadamada aqoonsaday Israa’iil maadaama culeys badan ay kala kulmeyso Mareykanka iyo Israel. Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber
ADDIS ABABA — Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Axaddii u qabtay hogaamiyayaasha gobolka Tigray inay isku soo dhiibeen 72 saac gudahood, kahor weerar aan waxba lala harin oo uu ku hanjabay inuu ka qaadayo caasimadda gobolka ee Mekelle. “Socdaalkiina wax burburinta waa uu soo dhammaanayaa, waxaana idinku boorineynaa inaad si nabad leh isugu soo dhiibtaan 72 saac gudahood, idinka oo garowsan inaad joogtaan meel aan laga laaban karin,” ayuu Abiy ku yiri bayaan uu soo saaray oo ku socday madaxda xisbiga TPLF. “Ka faa’iideysta fursaddan ugu dambeysa,” ayuu ku daray. Abiy Ahmed ayaa sidoo kale ugu baaqay ciidamada TPLF “inay si nabad leh isku dhiibaan”, wuxuuna ku booriyey shacabka magaalada Mekelle, inay ciidamada dowladda kula saftaan “inay caddaaladda horkeenaan kooxdan dalkooda qiyaamay”. Ciidamada dowladda Ethiopia ayaa shalay ku hanjabay inay qabsan doonaan magaalada caasimadda, ayaga oo adeegsanaya taankiyo ay sheegeen inay ku hareereyn doonaan. Hase yeeshee hoggaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ayaa ballan-qaaday “dagaal xooggan” oo lagu celin doono soo siqitaanka ciidamada dowladda. “Waxay bixin doonaan qiimaha tallaabo kasta oo ay qaadaan,” ayuu u sheegay AFP. Debretsion ayaa ka digay in weerarka Mekelle uusan noqon doonin dhammaadka dagaalka. “Inta ciidamada duulaanka ah ay ku sugan yihiin Tigray, dagaalka ma joogsan doono,” ayuu yiri. AFP
Daawo: Wasiirka Cusub ee Arrimaha Debedda Somalia oo Si Ballaadhan Loogu soo dhaweeyay Caasimadda.Muqdisho
Hoggaamiyaha Gobolka Tigray ee dalka Itoobiya Debretsion Gebremichael ayaa meesha ku gacan seyray digniin kasoo yeertay Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo muddo 72 saacadood ah loogu qabtay inay madaxda Tigray isu dhiibaan ciidamada Itoobiya. Debretsion Gebremichael ayaa u sheegay wakaalada wararka Reuters in hanjabaadda kasoo yeertay dowladda Itoobiya ay thay mid lagu daboolayo jabka ciidamada dowlada Itoobiya kasoo gaaray saddexda aag ee dagaalku ka socdo, dibna loogu habeynayo ciidamada jabay ee niyad jabsan sida u yiri. Ad “Waxaan nahay mabda’ ku dagaalamaya oo diyaar u ah inay dhintaan iyagoo difaacaya xuquuqdooda inay maamulkaaso degaankooda” ayuu yiri hoggaamiyaha TPLF Debretsion. Dowladda Itoobiya ayaa u eedeysay TPLF inay burburisay garoonka diyaaradaha magaalada Axum ee taariikhiga ah, waxaana lasoo bandhigay muqaallada dhabbaha diyaaradaha oo dhaawacyo waaweyn la gaarsiiyey, lana burbriyey. laakiin waxaa arrrintaasi beenisay TPLF. Warar Xul ah
Updated on November 23, 2020 4:22 pm